Kenya oo xirtay saddex nin oo laga raadinayay Masar iyo Soomaaliya oo ku eedeysan arrimo argigixiso – Radio Damal
Saraakiil ka tirsan Booliska La-dagaalanka Argagixisadda Kenya ee Mombasa ayaa xiray saddex eedeysane oo lagu tuhunsan yahay falal Argagixiso, oo ay ku jiraan 2 nin oo ay baadi-goobayaan Dowladdaha Masar iyo Somalia.
Booliska ayaa ku eedeeyay Mohamed Shendy Elhosseiny, Mustafa Abdi Saciidi iyo Mohamed Mohamed Abdullahi in looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin koox argagixiso ah oo xubin ka ah Kenya, Uganda, Soomaaliya iyo Masar.
Sida lagu sheegay warbixin sirdoon, Mr Shendy iyo Mr Saidi ayaa laga baadi goobayay Masar iyo Soomaaliya dambiyo aan la shaacin.
Mr Shendy waa Masaari halka labada kale ay yihiin Kenyan asal ahaan Soomaali ah.
Saddexdan ayaa Khamiistii la soo taagay maxkamadda Mombasa halkaas oo saraakiisha la dagaalanka argigxisada ay ka codsadeen in loo oggolaado inay xabsiga ku hayaan 15 maalmood si baaritaankooda loo dhammeeyo.
Qoraal maxkamadda la horkeenay, ayaa Mr Geoffrey Omete oo ka tirsan sirdoonka Kenya wuxuu sheegay in saddexda qof loo xiray falal ay ka shakiyeen oo ay ka wadeen Mombasa.